United Airlines Inotarisira Kudzoka Kubatsiro muQ3 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines Inotarisira Kudzoka Kubatsiro muQ3 2021
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
United Airlines inotarisira kuenderera mberi nekuwana sezvo mamwe mabhizinesi achidzoka kupera kwezhizha uye muna 2022, nekuzara zvizere mukuda kunotarisirwa ne2023.
United Airlines inozivisa yechipiri-kota 2021 mhedzisiro yemari.
United inoona nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa kuwana mari.
Mapurojekiti emuchadenga akachinjisa pre-mutero mari muhafu yepiri ya2021.
United Airlines (UAL) nhasi yazivisa yechipiri-kota 2021 mhedzisiro yemari. Iyo kambani ikozvino inotarisira yakanaka yakagadziriswa pre-mutero mari mune yechitatu uye yechina makota e2021 sekufamba kwekuda kudzoreredza.
Kuita kwekota yechipiri yekambani kwakapfuura zvakatarisirwa zvepakutanga sekufambiswa kwenyika dzese uye kufamba kwebhizimusi kwakakurumidza kunyange nekukurumidza kupfuura zvaifungidzirwa, pamwe nekuenderera mberi kwekukohwa goho. Tichitarisa kumberi, kambani inotarisira kuenderera mberi nekuwana sezvo mamwe mabhizinesi achidzoka kupera kwezhizha uye muna 2022, nekuzara zvizere mukuda kunotarisirwa ne2023.
"Nekuda kwehunyanzvi uye kutsungirira kwevashandi veUnited vakashanda nesimba kuti vatarisire vatengi vedu kuburikidza nedenda, ndege yedu yasvika padanho rine musoro: tiri kutarisira kudzoka mukuita purofiti zvakare," akadaro United Airlines CEO Scott Kirby. "Sezvatinobuda kubva mudambudziko rakanyanyisa kunetsa rakasangana nekambani yedu, tave kutarisana zvakanyanya nezano redu reUnited Next iro richashandura ruzivo rwevatengi vedu uye kubatsira kuzadzikisa kugona kweUnited."
Yechipiri Quarter Yemari Mhedzisiro
Yakataurwa yechipiri kota 2021 inodzika pasi 46% ichienzaniswa neyechipiri quarter 2019.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 kurasikirwa kwemadhora 0.4 bhiriyoni, yakagadziriswa kurasikirwa kwese kwemadhora 1.3 bhiriyoni.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 yakazara inoshandisa mari inosvika madhora 5.5 bhiriyoni, pasi 52% zvichienzaniswa nekota yechipiri 2019.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 Yese Revenue paIpo Inowanikwa Seat Mile (TRASM) yepasi 11.3% ichienzaniswa neyechipiri quarter 2019.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 yekushandisa mashandisiro pasi pe42%, pasi 32% kusasarudzira chaiwo mareti (makiredhi), zvichienzaniswa nechetatu kota 2019.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 pre-tax margin yezvakaipa 10.3%, yakaipa 29.2% pane yakagadziriswa hwaro.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 yakagadziriswa Mahoro Asati Afarira, Mitero, Kuderera uye Kushambadza (EBITDA) marginal eakaipa 10.7%.
Yakakwidziridzwa yakachengetedzwa mari yakakwenenzverwa neakawanda eUnited network yematanho, nzira, uye magedhi - akagadzirwa nemadhora mazana mana emadhora mukupa kwakazvimirira kwemabhondi, iyo $ 4 bhiriyoni yemari yechikwereti, uye $ 5 bhiriyoni inotenderera chikwereti nzvimbo. Iyi ndiyo yekutanga yemari yayo yemari uye iyo hombe isingabatanidze mari kutengeserana munhoroondo yendege.
Yakataurwa yechipiri kota 2021 ichipera kuwanikwa kwemari7 yemadhora anosvika mabhiriyoni makumi maviri nematatu.